Prince George dere ụlọ ọrụ Winnie the Pooh
O yikarịrị ka ememe ememe jubilii nke Queen Elizabeth II gafechara, mana ndị na-ahụ n'anya na-anọgide na-eme ka ezinụlọ ndị ahụ okpueze nwee onyinye ndị a na-atụghị anya ya. Site n'ememe nke eze nwanyi na-amaghi, e biputara akwukwo di nma, na-agwa ndi mmadu banyere njem nke anu ohia nke Winnie na ndi enyi ya na Buckingham Palace. Ndị na-egwuri egwu na-aga London iji kelee nwa ụbọchị ọmụmụ ma nye ya onyinye.
Kedu ihe dị ịrịba ama gbasara akwụkwọ a? Nke bụ eziokwu bụ na otu n'ime ndị dike ya ghọrọ onye na-eto eto n'ocheeze ya - Prince George, nwa nwa nwa nwanyị ọmụmụ na nwa nke Dukes nke Cambridge. N'ime ihe atụ maka akwụkwọ ụmụ, a na-ese nwa George na kaadi cardigan ya hụrụ n'anya. Ọ bụ na jaket a na ya zutere mama na nwa ọhụrụ nwanyị Sharkottu na ụlọ nna ya na nna ya.
Ejiji ụwa na ndị mmadụ!
Mgbe foto onye na-eto eto nọ n'ocheeze ahụ wee banye na mgbasa ozi, ndị agbata obi na-ahụ maka ndị ọchịchị Briten na-achọtara ndị Amaia Kids cardigans, bụ nke na-efu $ 60 n'afọ gara aga. Ọtụtụ ndị na-asụ Bekee chọrọ ka ụmụ ha yie nwa George. Onye edemede England, bụ Jane Riordan kọwara George n'ihe odide ya dị ka "nwata nwoke na-eto eto karịa Christopher Robin nakwa dị ka Tigrul". O nwetara onyinye site na Pyatochka - a na-acha uhie uhie ma na-akọrọ ntị nke onye edemede nke akwụkwọ ahụ - Winnie the Pooh.
Kevin Spacey dinara maka ọgwụgwọ na ụlọ ọgwụ ahụ dịka Harvey Weinstein
Mark Zuckerberg natara onyinye na nhọpụta "ọrụ Ịntanetị" ... na Kazakhstan
Kedu ihe bụ Amber Hurd na Johnny Depp mgbe ha kwụsịrị?
Kaitlin Jenner na mgbasa ozi mgbasa ozi ọhụrụ H & M
Bella Hadid mere uwe ya na ejiji ya na Dial brand dinner na Cannes
Kelly Rohrbach na ntaneti ihe nkiri na-ekpo ọkụ maka magazin dị egwu
Quentin Tarantino mere ndokwa maka nri abalị iji sọpụrụ onye ọ hụrụ n'anya
Beyonce na Jay Z na-aga Los Angeles n'ihi otu nwa nwanyị
Ozugbo atọ supermodels na mkpọsa akpa Versace
Biography nke Jennifer Lopez
Javier Bardem ruru ala mita 300 na Antarctic
Heidi Klum na Akara
Massage maka ụmụ nwanyị dị ime
Unconventional Jennifer Lopez: mkpuchi magazin Ndị mmadụ na agbapụ na usoro
Akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ - mgbanwe ejiji nke uwe si evocative na-adị kwa ụbọchị
Mgbanwe nke aha nwata
A jaket na a basque - na ihe na-eyi na otú e si mepụta ihe oyiyi oyiyi?
Yist fertilizing maka seedlings - Ezi ntụziaka
10 egwu egwuregwu kachasị egwu nke ndị nne na nna kwesịrị ịma banyere
Ogige Botanical (Bogor)
Okpomọkụ maka allergies na ụmụaka
Taylor Swift juru onye ọ bụla anya na onye nwere obi ike
Ọnwa ọnwa na ime ime
Afọ uwe - na ihe ị ga-eyi?
Jennifer Lawrence na Darren Aronofsky hụrụ n'ehihie nke ihe nkiri ahụ bụ "Mama"
Ntucha ihu nke ihu - olee otú usoro nke Ụlọ Mmanya, na otu esi eme ya n'ụlọ?
Isi ọwụwa na ụlọ nsọ na anya
Achịcha Bechamel - uzommeputa